Amos 7 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
7 Eyi na Awurade Tumfoɔ Yehowa ma mihui; hwɛ, na ɔreboaboa mmoadabi ano, bere a aba a edi akyiri no fii ase sɛ ɛreyi ne ti no.+ Eyi yɛ bere a wɔatwa ɔhene sare awie na wɔadua aba a edi akyiri no. 2 Na bere a wɔwee asase no so afifide wiei no, mekae sɛ: “O Awurade Tumfoɔ Yehowa, mesrɛ wo, fa firi.+ Yakob bɛyɛ dɛn agyina? Osua!”+ 3 Afei Yehowa sesaa n’adwene.+ Na Yehowa kae sɛ, “Ɛremma saa.” 4 Eyi na Awurade Tumfoɔ Yehowa ma mihui; hwɛ, Awurade Tumfoɔ Yehowa nam ogya so ne ne man redi asi;+ na ɛnonom ebun kɛse no mu nsu nyinaa, na ɛhyew asase no. 5 Na mekae sɛ: “O Awurade Tumfoɔ Yehowa, mesrɛ wo, gyae.+ Yakob bɛyɛ dɛn agyina? Osua!”+ 6 Afei Yehowa sesaa n’adwene.+ Na Awurade Tumfoɔ Yehowa kae sɛ, “Eyi nso remma.” 7 Eyi na ɔma mihui bio; hwɛ, na Yehowa gyina ɔfasu a wɔde prumo+ ato asi hɔ so, na na prumo hyɛ ne nsam. 8 Afei Yehowa bisaa me sɛ: “Amos, dɛn na wuhu yi?” Ɛnna mibuae sɛ: “Ɛyɛ prumo.” Na Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: “Mede prumo besi me man Israel mfinimfini.+ Na merenhu no mmɔbɔ bio.+ 9 Isak sorɔnsorɔmmea+ nyinaa bɛdan amamfõ na Israel kronkronbea+ asɛe;+ na mɛtwe nkrante wɔ Yeroboam fie so.”+ 10 Ɛnna Betel+ sɔfo Amasia soma kɔɔ Israel hene Yeroboam+ nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Amos apam wo ti so wɔ Israel fie pɛɛ.+ Asase no ntumi nkora ne nsɛm nyinaa so.+ 11 Amos se, ‘Yeroboam bewu nkrante ano; na nea ɛbɛyɛ biara Israel befi n’asase so akɔ nkoasom mu.’”+ 12 Na Amasia ka kyerɛɛ Amos sɛ: “Ɔdehufo,+ guan kɔ Yuda asase so kodidi wɔ hɔ na hyɛ nkɔm wɔ hɔ. 13 Na Betel ha de, nhyɛ nkɔm bio,+ efisɛ ɛyɛ ɔhene kronkronbea+ ne ahenni fie.” 14 Ɛnna Amos ka kyerɛɛ Amasia sɛ: “Ná menyɛ odiyifo anaa odiyifo ba;+ mmom na mehwɛ mmoa+ na mifitifiti sikamɔɔ nnuaba ho nso. 15 Afei Yehowa ma migyaee mmoa no hwɛ, na Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ, ‘Kɔhyɛ nkɔm kyerɛ me man Israel.’+ 16 Enti afei tie Yehowa asɛm, ‘So woreka sɛ: “Nhyɛ Israel ho nkɔm,+ na nka asɛm biara+ ntia Isak fie”? 17 Enti nea Yehowa aka ni: “Wo yere bɛyɛ aguaman wɔ kurow no mu.+ Na wo mmabarima ne wo mmabea bɛtotɔ nkrante ano. Na wɔbɛtwe susuhama ato w’asase so akyɛ afa. Na wo nso, wubewu asase a ɛho ntew so,+ na Israel befi n’asase so akɔ nkoasom mu.”’”+